कोरोना नियन्त्रणका उपाय बारे चीनबाट नेपाल र विश्वले सिक्ने कि ?
यतिबेला सबै खाले मतभेद बिर्सेर संकट र आपतको यस घडीमा सबै राष्ट र सम्पूर्ण मानवजाति एक भएर महामारीको सामना गर्नुपर्छ । साथै एक अर्कालाई हिलो छयाप्ने र मौकाको फाइदा लिन खोज्नेहरुबाट सतर्क रहनुपर्छ । सकभर रोग र भाइरस संक्रमित हुन नदिन उच्च स्तरीय साबधानी अपनाउनु पर्छ ।
चीनको उहानबाट गतबर्ष सन २०१९ डिसेम्वर ३१ मा शुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) अहिले विश्वभरी फैलिएको छ । विश्व स्वास्थ संगठनले यसको संक्रमण र महामारीलाई प्याण्डेमिक (विश्वव्यापी महामारी) भनेर आधिकारिक रुपमा नै घोषणा गरेको स्थिति छ । यो नया कोरोना भाइरस जनस्वास्थको लागी चुनौतिको रुपमा फैलिएको छ । जसबाट अझ धेरै मानवीय क्षति पनि बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ । तसर्थ सबै मुलुकहरुले अत्यन्तै संवेदनशील भएर यसको फैलावटको सवालमा सजक र सतर्कता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
वास्तवमा यो संकट जनस्वास्थको मात्रै नभएर सवै क्षेत्रको लागि संकट हो । तसर्थ सबै क्षेत्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ, साँस्कृतिक लगायतका क्षेत्र र प्रतेक व्यक्ति मिलेर यो महामारी संकटको सामना गर्नु पर्ने स्थिति छ । अहिलेसम्म यसले ३४ हजार मान्छेको ज्यान लिइ सकेको छ भने ७ लाख भन्दा बढी मान्छे संक्रमित भई सकेका छन । खुशीको कुरा सजक र सतर्कताको कारण संक्रमित मध्ये १ लाख २३ हजार मान्छे निको भएर घर फर्केका छन् । यसको चपेटा र प्रभावमा १९९ मुलक रहेका छन भने अति नै प्रभावित २५ मुलुक रहेका छन् । व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सजिलै र निरन्तर सर्न सक्ने यो महामारी सिमित भूगोलमा मात्र नभई अहिले सबै महादेश र विश्व भरी फैलिएको छ । शुरुमा चीनको उहानमा कोरोना १९ को इपीसेन्टर थियो र सबैभन्दा बढी ३ हजार २ सय ३७ जना मान्छेको मृत्यु भएको थियो । तर अहिले यूरोपको इटालीमा कोरोनाको इपीसेन्टर रहेको छ र चीन भन्दा पनि बढी १० हजार २ सय मान्छेको ज्यान गएको स्थिति छ । त्यसपछि स्पेनमा ६ हजार ३ सय मान्छेको मृत्यु भएको छ । विश्वमा ७ अर्व, ७७ करोड, २३ लाख भन्दा बढी जनसंख्या रहेकोमा ३ अर्व भन्दा बढी जनसंख्या चीन र भारतमा मात्रै रहेका छन् । अहिले चीन र भारत दुबै मुलुक कोरोना १९ बाट र्सक्रमित र प्रभावित छ ।
नेपालमा कोरोनाको उच्च जोखिम र सतर्कता
महामारीको अर्थ बुझाउने अग्रेजीका दुईवटा शव्दहरु छन् – एपिडेमिक र प्याण्डेमिक अर्थात् ‘एपिडेमिक’ले कुनै खास क्षेत्र विशेषमा सिमित भन्ने बुझाउँछ तर ‘प्याण्डेमिक’ले एकै पटक विश्वभरि फैलिने महामारी रोगलाई बुझाउँछ । तसर्थ विश्व स्वास्थ संगठनले कोरोना १९ लाई प्याण्डेमिक महामारीको रुपमा घोषणा गरेको छ । यस रोगको प्रमुख लक्षणहरु ज्वरो आउनु, घाँटी खसखस गर्नु, सुख्खा खोकी लाग्नु, मांशपेसी दुख्नु, पखाला लाग्नु, सुगन्ध र खानाको स्वाद थाहा नपाउनु, सिगान बगिरहनु, टाउको दुख्नु, सास फेर्न अप्ठयारो हुनु मानिएको छ ।
नेपालमा पनि अहिले ५ जना कोरोना रोगको विरामी देखा परेका छन् । तर शंकामा रहेका ८ सय भन्दा बढी विरामीको अनुसन्धान भने भएको छ र कतिपय क्यारेन्टाइनमा पनि बसेका छन् । अर्काेतिर विश्व स्वास्थ संगठनले हालै नेपाल र दक्षिण पूर्व एशियालाई अति उच्च जोखिम मुलुकमा राखेको घोषणा पनि गरेको छ । तसर्थ यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर संक्रमण हुनु अघि समयमै उच्च सतर्कता अपनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । यसको लागि नेपालले उच्च स्तरीय रोगथाम तथा नियन्त्रण समिति गठन गरेको छ । हाई अलर्टमा रहेर अन्तर्राष्टिय उडान रद्ध गरेको छ । एअरपोर्टमा हेल्थ डेस्कको व्यवस्था, विधालयदेखि विश्वविधालय वन्द छन, हेल्थ क्लव, डान्सवार र सिनेमा हल वन्द, शुरुमा २५ जना भन्दा बढी एकठाउमा भेला हुन बन्देज लगायत चीन र भारतका नाकाहरु बन्द भएका छन् । साबुन पानीले हात धुने, सेनीटाइजरको प्रयोग गर्ने र माक्स लगाउने, अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट ननिस्कन भनेर पुरै देशलाई लकडाउन गरिएको छ । आकस्मीक विरामीको निम्ति वेडको र आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था जस्ता उपायहरुको निर्देशन दिएको छ ।
भारतका प्रधानमंन्त्रीको सक्रियतामा कोरोना सम्बन्धी सार्क स्तरीय भिडीयो कन्फरेन्स भएको छ र १० मिलियन डलरको आकस्मीक कोष समेत बनेको छ । प्रधानमंन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीलाई कोरोना १९ बाट सजक र सतर्क रहन सम्बोधन गर्नुभएको छ । सार्कको आकस्मीक कोषमा १ मिलियन डलर नेपालले राखेको छ । साथै नेपालको सरकारले ५० करोडको आकस्मीक कोषको स्थापना गरेको छ । चीनले नेपाल लगायत २२ मुलुकका परराष्ट तथा स्वास्थमंन्त्रीसंग कोरोनाको संक्रमणलाई फैलिन नदिन, अनुभव र सहयोग आदान प्रदानको निम्ति भिडीयोवार्ता समेत गरेको छ ।
नेपाल र विश्वले चीनबाट सिक्ने कि ?
चीनको उहानमा कोरोना भाइरस देखा पर्ने वितिकै उहानको आवात जावतमा प्रतिबन्ध लगाएर लकडाउन गरयो । हुपेइ प्रान्तका १५ वटा शहरहरु जहा ६ करोड जनसंख्या थियो ठप्प र बन्द थिए । आवात जावत हुन्छ भनेर शहर जोडने राजमार्गहरु भत्काइएका थिए । हवाई र रेलसेवा स्थगित थिए । शहरका मानिसहरुलाई घरमै बस्न कडा निर्देशन थियो । संक्रमित विरामीहरुलाई राख्न केहि दिनमै ठूला अस्पताल वनाइयो । सबैलाई माक्स लगाएर हिडन अनिवार्य गरीयो । माक्स नलगाई अटेरी गर्ने र नियम उलंघन गर्नेलाई खावोमा बाध्नेसम्मको हर्कत गरीयो । टेस्टीग किट मार्फत जाच गर्दा शंका लागेका संक्रमित विरामीलाई जर्वजस्ती क्यारेन्टेनमा राखियो । सामान ओसार पसार तथा अन्य कामको निम्ती रोवर्ट समेत प्रयोग भयो । अस्पतालमा भेन्टीलेटर सहितको आइसियूको व्यवस्था गरी अहोरात्र विशेष पहिरनमा डाक्टर र नर्शहरु खटिए । शडकहरुमा किटनाशक औषधी व्यापक रुपमा छर्किने काम भयो । फलस्वरुप चीनमा कोरना भाइरस प्रभावकारी रुपले नियन्त्रणमा आयो र अहिले फैलिनबाट रोकिएको छ । विभिन्न प्रकारका हल्ला, अफवाह र भ्रमहरुलाई समयमा नै चिर्ने काम भयो ।
नेपालमा समयमा नै सावधानी अपनाउनु पर्छ
नेपाल पनि कोराना भाइरसको रातो वतिको प्रभावमा छ । छिमेकी देश तथा विश्वभरी प्रभाव बढेको हुदा कोरानाको संक्रमणले नेपाललाई पनि चाडै लपेटन सक्छ । विश्व स्वास्थ संगठनले वारम्वार नेपाललाई उच्च जोखिममा राख्दै आएको जगजाहेर छ । उसले दक्षिणको नाका बन्द गर्न पनि सुझाव दिएको छ । किनभने भारतमा कोरोनाबाट ३० जनाको मृत्यू भैसकेको छ र क्रमश संक्रमण प्राय सबै राज्यमा फैलिएको छ ।
चीनले आज विश्वभरी कोरोना संक्रमित देशहरुमा सहयोग र सदभाव देखाउदै आएको छ । अहिले कोरोना नियन्त्रण र विश्वभरी सहयोगमा समेत चीन अग्रपंक्तिमा रहेको छ । अमेरीका आफै रोगसंग लडीरहेको छ भने चीनले एशिया, अफ्रिका, यूरोपलाई सहयोग गरीरहेको छ । आजसम्म कोरोनाको भ्याक्सीन र औषधी पता लागेको स्थिति छैन । तत्काल पता लागी हाले पनि वजारमा भ्याक्सीन आउन कम्तिमा पनि ५ देखि ७ बर्ष लाग्न सक्छ । अहिलेसम्म मलेरीया, एचआइभी जस्ता भ्याक्सीनको प्रयोग गरीएका छन । अर्थात त्यस्ता औषधीहरु रिसर्च र प्रयोग मात्र गरीएका हुन । संयोगले कतिपय स्थानमा नियन्त्रणमा पनि आएका छन तर ढुक्कले विश्वास र भरोसा गरी हाल्ने स्थिति भने छैन ।
तसर्थ सजगता र उच्च स्तरीय सतर्कता अपनाएर देशलाई लकडाउन गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । सम्भावित कोरोना संक्रमितहरुलाई विभिन्न अस्पतालहरुमा भेन्टीलेटर सहितको आइसियूको व्यवस्था धेरै संख्यामा गर्नुपर्छ । आज इटली लगायत कतिपय मुलुकहरुमा आइसियूको अभावले पनि संक्रमितलाई बचाउन सकिने स्थिति भएन । प्रमुख रुपले चीनबाट भेन्टीलेटर, टेस्टीग किट, स्वास्थकर्मीले लगाउने पीपीई, पंजा र जुता र माक्सहरुको सहयोग लिदै उचित मुल्यमा किन्न चुक्नु हुदैन साथै एम्बूलेन्स लगायतका उपकरणहरु सहयोग लिनु पर्छ । चीनले भरखरै चार्टर विमानबाट इटाली, स्पेन, इराक जस्तै नेपाललाई पनि सामाग्रीहरु पठाएको स्थिति छ । नेपाल चीन सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन अनुभवहरु आदान प्रदान गर्नुपर्छ । महामारी मानव जातिकै लागि ठूलो खतरा हो ।
यतिबेला सबै खाले मतभेद बिर्सेर संकट र आपतको यस घडीमा सबै राष्ट र सम्पूर्ण मानवजाति एक भएर महामारीको सामना गर्नुपर्छ । साथै एक अर्कालाई हिलो छयाप्ने र मौकाको फाइदा लिन खोज्नेहरुबाट सतर्क रहनुपर्छ । सकभर रोग र भाइरस संक्रमित हुन नदिन उच्च स्तरीय साबधानी अपनाउनु पर्छ । रोग पता लाग्यो वा शंका लागेमा होम क्यारेन्टाइन (Home quarantine), क्यारेन्टाइन (Hospital quarantine) र सेपरेसन (Separation / Isolation)मा बसेर उपचार गराउनु पर्छ । हेलचक्राइ कदापी गर्नु हुँदैन । लकडाउनको सरकारी निर्णयलाई कडाइका साथ पालन गर्नुपर्छ । व्यक्ति व्यक्तिबाट सर्ने हुदा हमेशा निश्चित दुरीमा बस्नु पर्छ । सावधानी अपनाउनु र घरमा बस्नु नै अहिलेको निम्ति उतम उपाय हो ।
(चीन बिज्ञ कार्की, बामपन्थि राजनीतिज्ञ हुन ।)